Fandikàna Gazety: Teny vaovao, Tambajotra & Maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2019 6:45 GMT
Iray amin'ireo mpanoratra tena ankafiziko tamin'ny fotoana rehetra i Jhumpa Lahiri ary izy dia nanoratra tantara kely iray mahafinaritra ao anatin'ny The New Yorker, nomeny lohateny hoe “Ianaro Samirery ny Teny Italiana“. Resahana ao ny momba ny maha-zavadehibe aminy ny teny, ary tohizany ny làlany amin'ny fianarana tenimpirenena vaovao ao anaty toerana iray tena vaovao tanteraka, sy ny fomba nandrafetan'izany ny maha-izy azy. Mpisehatra iray ao anatin'ity lahatsoratra iray mahafinartira voasoratra ity ny Italiàna ary tsy vitako ny hiato tsy hamaky azy. Antenaiko fa hankafy koa ianareo!
Araka ny Fast Company, ny tenimpirenena ianaranao voalohany dia mety hanova ny fomba fandikànao ny tenimpirenena hafa rehetra aorian'izay — na adinonao aza izy io any aoriana! Ao anatinì'ity lahatsoratra ity, resahan-dry zareo ny momba ny andrana nataon'ny MRI notarihan'i McGill University sy ny Montreal Neurological Institute izay miresaka momba ny siansa ao ambadiky ny fandikàna ireo tenimpirenena vaovao miainga avy amin'ny tenindrenin'ny olona iray. Vakio & dia ampahafantaro anay izay hevitrao momba izany!
Trandrahan'ny Terminology Coordination ny fiantraikan'ny aterineto sy ny media sosialy amin'ireo tenimpirenena madinika sy tandindonin-doza, ao anatin'ity lahatsoratra ity nomeny lohateny hoe, “Aterineto sy media sosialy – fahasoavana sa ozona ho an'ireo fitenin'ny vitsy an'isa?” Loza mitatao ho an'ireo teny madinika ve ny aterineto sa mandrisika kosa ny fanomezana aina vao azy ireny? Tsidiho ny rohy etsy ambony mba hamakianao ny adihevitra sy handraisanao ny fanapahankevitra!